Sida loo dayactir Lugood Library Si fudud oo toos ah
Iyadoo sano ee soo degsado, degida iyo dhoofinta files warbaahinta maktabada Lugood aad yimaado qarow ah ee nadiifinta iyo abaabulka boqolaal gigabytes noocaas ah ee xogta iyo weliba. Hawsha Iyadaa hagaajin maktabadda buux noqdo ay noqotey. Mid ka mida in uu yahay wax caadi ah in music jecel Apple isticmaala qalabka waa maktabadda Lugood bedraggled iyo hesitance si aad u nadiifiso. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah iyada oo aan waxyaabaha ku haboon, aad wedayaa in uu abaabulo maktabadda Lugood aadayo aan micne lahayn.
Qaybta I. Dhibaatooyinka Common Iyadoo Sixidda Maktabadda
• Macluumaadka metadata oo ka mid ah files audio ka caawisaa Lugood ee waa liiska. Tan waxa jira ilo kala duwan ka tareenka ayaa la keeno si aad maktabadda, saxnaanta metadata wuxuu noqonayaa nebulous. Mesh weyn ah metadata untangled Tweaking waa dhibaato wayn oo la soo gudboonaado halka qamaar maktabadda.
• The kuwan raadkaygay nuqul in mashquulin maskaxda qalabkaagu ay waa arrin kale oo ka mid ah maktabadda weyn Lugood. Takhalusid kuwan raadkaygay kuwaas oo gacanta ku qaadan karo saacadood.
• In seenyada maanta, aad, sida qof kasta oo kale, oo doonaya in ay kor u muuqaal waayo-aragnimo ah ee dhagaysiga muusigga ah. Tani waa mid ku fula fanka cover album soo jiidasho leh. Jeer ka badan oo farshaxan daboolka ka maqan aad kuwan raadkaygay / album. Way adag tahay in gacanta raadiyo daboosho ku haboon oo iyaga geliso in raadkaagu.
• tags ayaa ID3 ee tareenka waxaa inta badan ka maqan, ama macluumaad aan sax ahayn oo la geliyo iyaga in. Tags kuwaas oo gacanta Tweaking noqon karaa geedi socod adag oo sabab u ah la dhaafi karin ee maskaxda aadanaha in la xasuusto macluumaad oo dhan oo dhan kuwan raadkaygay ku sugan maktabadda Lugood aad.
Habka ugu badan si uu u xaliyo dhamaan arrimihii yiri waa orchestration buuggan oo dhan kuwan raadkaygay ku maktabadda Lugood aad oo gargaar ka abaabulka doorashooyinka waxaa bixiya laftiisa Lugood. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira khasaaraha badan ee habkan: . • Tani waa habka daal waqti lumis iyo implacably ah • waxaa laga rabaa in aad raad sato fanka daboolka ka maqan online gacanta haddii aad rabto in iyagoo aad ku dartid albums ama kuwan raadkaygay shaqsi .. • Mararka qaarkood Lugood daaweysey track kasta oo ka mid habaysan, sida album gaar ah, taasina waxay u kala firdhiyaa track oo dhan aragtida album ah. Xallinta arrintan gacanta noqon kartaa wax adag oo daalin. • Waxaad lumin kartaa xogta muhiim ah ka maktabadda sababtoo ah mararka qaar lagu jiro auto-synching, Lugood tirtirtaa faylasha indhotiri si toos ah.
Qaybta II. Sida loo dayactir Information Tag, saar Tracks nuqul, dayactir ka maqan Album daboolida
Si aad u badbaadi karaan habka arxan enervating hagaajin maktabadda Lugood aad, waxaad isticmaali kartaa qalab dhinac saddexaad inay sameeyaan legwork aad u. Mid ka mid ah codsiyada software ugu wanaagsan ee la heli karo ilaa-date waa TunesGo in waa qabanqaabiyaha music rasmiga ah ee ay soo Wondershare. Waxaad si fudud u maarayn karaan maktabadda iyo macluumaad kale oo ku kaydsan ee iDevice isticmaalaya barnaamijkan. Wondershare TunesGo waa qalab fiican oo la set caafimaad ee feature in xanuunka saxidda maktabadda toosaa Lugood uu yareyn karaa. Ka sokow abaabulka maktabadda, barnaamijku waxa uu dhowr qaababka kale ee la taaban karo oo ay ka mid wareejinta macluumaadka u dhexeeya qalabka Apple adiga oo aan haysan si ay u badbaadin aad kombuutarka laptop.
Inkastoo TunesGo Wondershare waa codsi bixisay, qaababka lagu naalloon karo oo cajiib ah u leeyahay ka dhigi u qalantaa qiimihii ugu. Software waa in ay macruufka, Mac OS X, iyo dadka isticmaala Windows heli karo.
Wondershare TunesGo waa tababaraha xirfad Apple qalab. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad soo dajiyo iyo abuurtaan codsiga, waxaa si toos ah syncs la Lugood oo la hor-rakibay qalab aad. Ka dib markii synching la Lugood, TunesGo bandhigayaa waxyaabaha aad maktabadda uu furmo suuqa hoose.
Si aad dayactir Information Your Tag
Burcad TunesGo Wondershare.
Guji ka Switch in Lugood koronto-in button ka dhinaca kore ee midigta ah interface in la bilaabo Lugood iyo auto-u hagaagsan labada barnaamijyada.
Fiiro gaar ah : Waa in aad gacanta riix Switch in Lugood koronto-in button u .Wadashaqayntaas Lugood mar kasta oo aad ku abuurtaan TunesGo Wondershare. Si kastaba ha ahaatee Wondershare TunesGo waxaa si toos ah bilaabay mar kasta oo aad initialize Lugood.
Marka sameeyo, dooro Music doorasho hoos Library category ka Murayaad bidix ee interface ka.
Sida liiska tareenka in aad maktabadda u muuqataa, dooro Maamul Music Library doorasho ka Wondershare TunesGo guddiga in booda ee xaq.
Guji ka Nadiifinta Lugood Library doorasho ka ballaariyeen Maamul Music Library fursadaha.
Guji ka Tracks la maqan music tags doorasho ka fursadaha kale oo muujinaya in kor loogu soo ganaax-ka qabi karto.
Marka liiska kuwan raadkaygay la tags sax ahayn ka muuqan suuqa kala popup ah, riix badhanka Fix dhankiisii ​​top-xaq. Fiiro gaar ah : Marka aad sidaas samayso, TunesGo si toos ah wuxuu diyaariyaa dhan macluumaad tag maqan iyo khaldan ee tareenka ee maktabadda.
Riix Save mar aad ku qanacsan tahay isbedelada.
Si aad u saar Tracks nuqul ka Your Library
Marka aad Lugood waxaa synched la TunesGo Wondershare, oo rummages iyo baaritaan loogu talagalay tareenka in aad maktabadda u baahan in fiiro gaar ah, liiska habaysan oo ah kuwan raadkaygay noocaas ah waxa la soo bandhigay Murayaad saxda ah ee interface ka.
Marka ay tani dhacdo, dooro songs nuqul ka mid ah liiska ka Wondershare TunesGo guddi ka Murayaad midig ee interface ka.
Laga soo bilaabo liiska soo bandhigay faylasha nuqul, u fiirso kuwa aad dooneyso in aad tirtirto.
Marka aad soo xulay faylasha loo baahnayn, guji badhanka Clear All in ay tirtirto oo dhan kuwan raadkaygay nuqul in go hal.
Si aad u dayactir ka maqan Album daboolida
Guji ka Tracks dabool album ka maqan doorasho ka Wondershare TunesGo guddi oo la soo bandhigay qaybta midig ee interface ka.
Marka liiska oo dhan tareenka aan farshaxanka dabool la soo bandhigay, ganaax-habayn ah kuwan raadkaygay sida laguugu sahlo.
Guji ee Save button marka loo sameeyo si loo badbaadiyo isbedel ah.
Top 3 Lugood shawladda kaabta 2015
7 ee muhiimka ah ee kaabta Talooyin Lugood ma aha inaad Miss
> Resource > Lugood > Sida loo dayactir Lugood Library Si fudud oo toos ah